मेयरको सहयोग संकलनप्रति समितिकै सदस्यहरु असन्तुष्टि
‘सहयोग उठाउने संस्थागत निर्णय छैन्’
बिहिवार, जेठ ६, २०७८ प्यार अलि खाँन
मेयर एक्लै हिडिरहेको आरोप
प्यूठान : कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्लामा नागरिक स्तरबाट सहयोग संकलन भइरहेको भन्दै जिल्ला स्तरिय आइशोलेसन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्यूठान नगरपालिका नगरप्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतीले केही दिनदेखि दैनिक रुपमा नागरिकहरुले स्वतःस्र्फूत सहयोग गरेको जानकारी गराइरहेका छन् । उक्त सहयोगप्रति आइशोलेसन व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
कोभिड १९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) प्यूठानले प्यूठान नगरपालिका प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरिय आइशोलेसन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लाका सवै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु सदस्य छन् । डिसिसिएमसीको बैठकमा जिल्ला सतरिय आइशोलेसन केन्द्र संचालनका लागि कसैले नेतृत्व लिन नमानेपछि प्यूठान नगरपालिकाले यसको नेतृत्व लिएको हो ।
‘आइशोलेसन व्यवस्थापन समिति, डिसिसिएमसी र प्यूठान नगरपालिका कसैले पनि नागरिकस्तरबाट सहयोग जुटाउने बारेमा निर्णय भएको छैन्’,प्यूठान नगरपालिका उपप्रमुख एवं समितिका सदस्य शान्ता आचार्यले भनिन्,‘जनताको सहयोग चाहिन्छ । तर, अहिले सहयोग मागिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन् । आवश्यक पर्दा संस्थागत निर्णय मार्फत आव्हान गरौला ।’ उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि बजेटकै अभाव भएमा नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट अरु क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कटौती गरेर भएपनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।
जिल्लामा तत्कालका लागि अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा बजेट आवश्यक परेपनि संघीय सरकार मार्फत डेढ करोड बजेट आइसकेकाले अन्य सहयोग आवश्यक नभएको बताइन् । ‘नगरप्रमुखले सहयोग भइरहेको जानकारी दिइरनुभएको छ’,उनले भनिन्,‘आइशोलेसन व्यवस्थापनका लागि भनेर सहयोग भएको भनिएता पनि यसबारेमा हामीलाई कुनै खवर छैन् ।’ आइशोलेसन व्यवस्थापन खर्चका लागि भनेर सहयोग भएपनि संस्थागत रुपमा नभएकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने उनको तर्क छ । नागरिकहरुलाई अवस्था बुझेर मात्र सहयोग गर्न उनले सुझाइन् ।
जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्यूठान नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ र अन्य ८ वटा स्थानीय तहहरुले दुई÷दुई लाख रुपैयाँ सहयोग नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेका छन् । आइशोलेसनमा अहिले १४ जना कोरोना संक्रमित विरामीहरुको उपचार भइरहेको छ ।
आइशोलेसन व्यवस्थापनका लागि भनेर सहयोग उठाउने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको नौवहिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष घन बहादुर बुढाले बताए । ‘अहिले नै सहयोग उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन्’,उनले भने, ‘बैठक पनि बसेको छैन् । योजनाका बारेमा पनि खासै केही सरसल्लाह भएको छैन् ।’
आइशोलेसन व्यवस्थापन समितिका संयोजक अर्जुन कुमार कक्षपतीले अहिलेसम्म ६ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको जानकारी गराए । ‘हामी सहयोग माग्दै हिडेका छैनौ, आव्हान पनि गरेका छैनौ’,उनले भने,‘आफैँ दिनन्छन् त हामीले कसरी हुन्न भन्ने ? जन्मदिनको अवसरमा, आमा बुवाको सम्झनामा मान्छेहरुले सहयोग गरिराखेका हुन् ।’ उनले यस बारेमा सकरात्मक भइदिन सवैलाई आग्रह गरे ।
ऐरावती गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्ध बहादुर बस्नेतले सहयोग संकलनप्रति आफ्नो चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले नै त्यो खालको अवस्था आएको छैन् । सवै स्थानीय तहबाट बजेट जम्मा भएको छ । मलाई लाग्छ सवै तहमा विपतका लागि मौजुदा पैसा पनि छ’,उनले भने,‘अहिले पैसाको अभाव भन्दा पनि अक्सिजन ल्याउने माध्यम नमिलेर समस्या भएको हो जस्तो लाग्छ । सारा मानिससँग पैसा उठाउने कुरा मलाई चित्त बुझेकै छैन् ।’
जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन व्यवस्थापन समितिको एक पटक बैठक बसेको सुनेपनि आफूलाई खवर नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘आ–आफ्नो तरिकाले काम गरेजस्तो देखिन्छ’,उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालमा खवर देख्दा व्यक्तिगत रुपमा बुझ्ने त गर्छु, तर संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय छैन् ।’ यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ध्यान नपुराएको होकी ? उनले प्रश्न गरे ।
नगरप्रमुखले सहयोग जुटाएकोप्रति नागरिकस्तरमा समेत आलोचना शुरु भएको छ । सरकारले नागरिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ भनेर आव्हान गरेमात्र सहयोग जुटाउनु राम्रो हुने नागरिकहरुको सुझाव छ । ‘अहिलेलाई सहयोग माग्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन्’,विजुवार टारीका स्थानीय यूवा सुमन सुवेदीले भने,‘यदि हो भने स्थानीय सरकारले संस्थागत रुपमा आव्हान गरोस् । जनता पैसा उठाउन तयार छन् ।’
उनले आइशोलेसनमा हिसावकिताव हेर्नेगरी सचिवालय गठन गर्न समेत सुझाव दिए । नगरप्रमुख एक्लैले सहयोग उठाउनु राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘सहयोग गर्छु भन्नेलाई अहिले होल्ड गरेर राख्नुपर्छ’,उनले भने,‘परेको बेला उहाँहरुसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।’
प्यूठान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट डेढ करोड रुपैँया, प्यूठान अस्पतालमै लुम्विनी प्रदेशबाट १० लाख र कोभिड खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, जेठ ६, २०७८, ०१:३२:५९
प्यूठानका प्रतिनिधी : आफू चढ्ने गाडी किने, जनता चढ्ने एम्बुलेन्स किनेनन् !
विपतका सारथी स्थानीय सरकार
जनताको मागमा आधारित बजेट ल्याउन सुझाव माग्दै इस्मा गाउँपालिका
के गर्दैछन् कोभिडमा स्थानीय सरकार ? माडी क्षेत्र प्यूठानका स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलो श्रृंखलामा ।
मंगलवार, जेठ ११, २०७८ प्यार अलि खाँन
सरुमारानीका अध्यक्ष चढ्ने गाडी, अव एम्बुलेन्स !
सोमवार, जेठ १०, २०७८ प्यार अलि खाँन
प्युठानमा खोलाले बगाउँदा बेपत्ता बुधवार, असार २, २०७८ 96